ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမှန်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုများချိန်မလဲ - Hello Sayarwon
ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမှန်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုများချိန်မလဲ
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 10/12/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်က ကျန်းမာရေးအတွက် သိထားဖို့လိုမယ့်အချက်တစ်ခုပါ။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမှန်ကန်ဆုံးရဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ဒီအရေးပါတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမှန်ဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုများချိန်ကြမလဲ……..
ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က ဘယ်လောက်လဲ….
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကမတူပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိလားဆိုတာကို အရပ်အမြင့်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို တွက်ချက်ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) နဲ့တွက်ချက်ပါတယ်။
BMI က ၁၈.၅ ထက်နည်းနေရင် ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက်နည်းနေတာပါ။
BMI က ၁၈.၅ နဲ့ ၂၄.၉ အတွင်းမှာရှိနေရင် ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ပါ။
BMI က ၂၅ ကနေ ၂၉.၉ အတွင်းမှာရှိနေရင် ရှိသင့်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ထက်များနေပါတယ်။
BMI က ၃၀ ထက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ အဝလွန်နေပါပြီ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်စေဖို့ သတိထားရမယ့်အချက်အချို့
ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတဲ့အခါ တိကျမှန်ကန်တဲ့ အဖြေထွက်ဖို့ဆိုရင်
တစ်ပတ် တစ်ကြိမ်ပဲကိုယ်အလေးချိန် တိုင်းပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းထည့်ထားပါ
စိတ်ဖိစီးတာ။ စိုးရိမ်စိတ်များတာတွေကြောင့် အများကြီးမစားမိပါစေနဲ့။
ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်လဲ………
အဝလွန်ခြင်းက အရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးရမှုရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ပါ
အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများမယ်
ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်နေတာမျိုးဖြစ်မယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို တိတိကျကျသိရဖို့ဆိုရင်ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာဖို့လိုပါမယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကို အမှန်အတိုင်းသိရဖို့ဆိုရင် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်ချိန်ရင်လုံလောက်ပါပြီ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ခဏခဏချိန်တာက စိတ်ဖိစီးမှုများစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာစေတာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတာက အချိန်မရွေးတိုင်းလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အမှန်ကန်ဆုံးသိရဖို့ဆိုရင် မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ဘာမှမစားခင် တိုင်းပါ။ ရတောင်မသောက်ပါနဲ့ဦး။ နောက်တစ်ချက်သတိထားရမှာက ဝမ်းသွားပြီးချိန်မှတိုင်းပါ။
ပေါင်ချိန်စက်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုကအတိအကျမတူနိုင်တာကို သတိရပါ
အိမ်မှာတိုင်းတော့ ကိုယ်အလေးချိန်က တစ်မျိုး၊ Gym မှာတိုင်းတော့ ကိုယ်အလေးချိန်က တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့လဲလို့ စဉ်းစားနေလား။ အကြောင်းကတော့ ပေါင်ချိန်စက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက မတူပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၂ ပေါင်လောက်တော့ ကွာနေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို အများဆုံးကျသွားနိုင်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က သိပ်မများနိုင်ပါဘူး
တစ်ပတ်ထဲကို ၅ ပေါင်ကျတယ်။ ၁၀ ပေါင်ကျတယ်ဆိုတာက ကျန်းမာစွာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားခြင်းလို့မဆိုသာပါဘူး။ ကျန်းမာစွာနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာက တစ်ပတ်ကို ၁ ပေါင်ကနေ ၂ ပေါင်အများဆုံးပါ။
အချို့ကပြောကြတယ် ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်များနေတယ်လို့ပေါ့။ ဒီအယူအဆက အပြည့်အဝမမှန်ပါဘူး။ အဝတ်အစားကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးရင်တောင် ၁ ပေါင်ထက်မကျော်တာတော့အသေအချာပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းခါနီးမှာ ဖိနပ်တော့ ချွတ်ပေါ့။
တနင်္လာနေ့မနက်မှာ ဝိတ်မချိန်ပါနဲ့။ ပိတ်ရက်မှာစားထားမိတာတွေကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်က တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိကျတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို သိဖို့ဆိုရင် သောကြာနေ့မနက်ခင်းစောစောမှာတိုင်းပေးပါ။
လေဒီလေးတို့အနေနဲ့ ရာသီလာချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်မတိုင်းပါနဲ့။ ရာသီမလာခင်နဲ့ရာသီလာနေချိန်မှာ ကိုယ်တွင်းမှာ အရည်စုပုံမှုများနေတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်က ရှိသင့်တာထက်ပိုများနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီလာချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန်မတိုင်းဖို့ပြောပါရစေ။
ရေကူးပြီးချိန်။ ရေချိုးပြီးချိန်တွေမှာ ဝိတ်မချိန်ပါနဲ့။ ဒီလိုပြောရတာက အရေပြားက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ရေကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်လို့ပါ။ ရေချိုးပြီးချိန်၊ ရေကူးပြီးချိန်မှာ အရေပြားက ရေကို ၁ ခွက်စာနေ ၃ ခွက်စာလောက်အထိစုပ်ယူထားတာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် နည်းနည်းလောက်တိုးနေနိုင်ပါတယ်။
The Health Effects of Overweight and Obesity https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/index.html Accessed Date 27 December 2019
How much should I weigh for my height and age? https://www.medicalnewstoday.com/articles/323446.php Accessed Date 27 December 2019
The right way to weigh yourself https://medicalxpress.com/news/2018-02-the-right-way-to-weigh.html Accessed Date 27 December 2019
5 Rules to Weighing Yourself — and When to Ditch the Scale https://www.healthline.com/health/fitness-exercises/weigh-yourself-guidelines Accessed Date 27 December 2019
7 Ways You Might Be Weighing Yourself Wrong https://www.goodhousekeeping.com/health-products/a26535846/how-to-weigh-yourself-correctly/ Accessed Date 27 December 2019
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့နေသူများ နှင့် ထိန်းချင်သူများ အတွက် အသုံးဝင်မည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်စားနည်းလမ်းအချို့
အမျိုးသားတွေမှာ ဘယ်လောက်အရပ်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ပမာဏ ရှိသင့်လဲ